Amin'ny akanjo hanaovana jeans amin'ny ankizivavy - mainty, fotsy, volo, akanjo, akanjo, akanjo?
Lamaody Lesona notsoahina
What to wear jeans overalls - the simple rules for creating a fashion image
Ao amin'ny lamaody maoderina, misy safidy maro ahafahana mitafy ny denim amin'ny ankapobeny. Ary indray mandeha dia tsara ny akanjo, maharitra ary mahazatra fiakanjo, fa tamin'ny fotoana iray dia natsangana ho lasa kolotsaina, nampidirina ho an'ny vahoaka. Ny lehibe indrindra dia ny mifidy ny fomba sy ny fomba, tsy matahotra ny hanao fanandramana ary misokatra ho an'ny vaovao.
Jeans ankapobeny 2018
Azonao atao tsara ny milaza fa ny ankizilahin'ny vehivavy 2018 dia mety hahagaga anao amin'ny fahasamihafany. Tsy mora sy mahasoa izy ireo. Nasehon'ireo modely amin'ny zava-manan'izao tontolo izao, fa ny maodely dia milaza fa misy safidy tsy vitan'ny akanjo isanandro ihany, fa mba hivoaka ao amin'ny hazavana ihany koa, misy fahavaratra, lohataona sy ririnina. Noho izany dia aoka ho azo antoka fa misy ny fomba tsara indrindra ho an'ny toetrandro, ary mandritra ny fotoana rehetra.
Amin'ny inona no mitafy denim amin'ny ankapobeny amin'ny ririnina?
Amin'ny ririnina, maro ny olona manana fanontaniana mikasika ny tokony hatao amin'ny tovovavy iray. Saingy tsy ny zava-drehetra dia toa sarotra satria mety hitranga amin'ny voalohany. Voalohany indrindra, misafidiana akanjo manga (manga, manga mainty, mainty). Mifanaraka tsara amin'ny jumper , sweater, sweater amin'ny fanangonana lehibe. Hanasa anao amin'ny hafanana mangatsiaka izy ireo ary hanome endrika sarotra.
Raha miresaka momba ny fitafiana ivelany isika dia tsy misy famerana. Mifidy amin'ny akanjo fiteteam-pandehandehanana, manomboka amin'ny endriny. Ireto safidy manaraka ireto dia avela:
Amin'ny ankapobeny, ny akanjo vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra na voajanahary dia hanatona. Ity angamba ny safidy tsara indrindra sy tsara indrindra, izay tena izy na amin'ny andro mafana aza.
Ny endrika sy ny endriny dia mijery ny famolahana ny denim rumper sy ny palitao. Ity farany dia mety ho be loatra, mivantana na amin'ny làlana tsotra. Ny fanamafisana ny fomba fanao voafidy dia hanampy ny kiraro sy ny Accessories.
Ny akanjo marevaka sy ny valan-javaboary dia mifanaraka tsara amin'ny Romper. Misafidiana ireo andian-tsambo napetraka, izay mety amin'ny fikojakoana azo alaina. Ny kiraro dia milanja hazo, boots amin'ny haingam-pandeha, modely amin'ny ririnina.
Amin'ny inona no tokony hikorontana ankapobeny amin'ny fahavaratra?
Ao amin'ny toeram-pivarotana fivarotana, ny ankamaroan'ny jeans amin'ny vehivavy dia miseho amin'ny ankapobeny, ary ny fiovaovan'ny fomba ahafahany mitafy bebe kokoa. Ireto ny sasany amin'ireo fampiendrehana mahazatra:
Ny mamorona sary mora sy mampihetsi-po ary malefaka dia tsara ho an'ny karazana blousse isan-karazany. Azony atao ny manoratra na manoratra. Izy ireo dia mifanaraka tsara amin'ny sambo maotina, kiraro kiraro na kofehy matevina.
Ho an'ireo ankizivavy tia ny fampiononana sy ny fampiharana, ny fitambarana tonga lafatra dia ho fihodinana amin'ny T-shirts, T-shirts ary tops. Ampio mora foana ny sary ary mametraka ny fanamafisana ny printy maoderina dia afaka midina ny soroka iray na ny harona roa.
Ny fisafidianana akanjo toy ny top, dia afaka mamorona sary samihafa ianao. Ny lamaody sy ny lokony mifanentana amin'ny tsipìka ara-barotra, ary ny modely misy loko noforonina dia mahaliana ny mijery ny tendron'ilay akanjo. Matetika izy ireo no tsy miasa.
Raha manana fanontaniana mikasika ny zavatra tokony hikirakira ny jeans amin'ny andro fahavaratra na andro maromaro ianao, dia afaka mandinika safidy maromaro: mitafy jumper avy amina jiro matevina miaraka amin'ny akanjo lava lava, akanjo marevaka, rivotra na pataloha amin'ny T-shirt, ambony na fehiloha.
Sary miaraka amin'ny denim amin'ny ankapobeny
Amin'ny vanim-potoana rehetra, sy ny lohataona mafana, ary ny jeans amin'ny ririnina mandoingitra ho an'ny ankizivavy dia ho rindrina marina-zashchalochkoy rehefa mamorona endrika lamaody. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Ny ankamaroan'ny modely dia tena ampy, fa ny fanangonana kiraro kanto sy accessories, miova ny antokon'olona ary miavaka tanteraka.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny lamaodin'ny lamaody dia mifidy loko manga malaza. Ny volon'ondry fotsy hoditra dia tsy malaza loatra ary tsy misy ilana azy. Indrindra indrindra ara-boajanahary dia mijery ny lohataona sy ny lohataona, manome ny sarin'ny fahazavana, ny fitiavany, ny hafanana. Tsy tena azo ampiharina izany, fa manarona tanteraka io hadalana tsy dia misy dikany io miaraka amin'ny hatsarany. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny akanjo lava fonosana, tops amin'ny printy leopard, T-shirts miaraka amin'ny sary mampihomehy. Ary aza hadino ny accessories.
Ragged jeans amin'ny ankapobeny
Nandritra ny fizaran-taona maromaro, ny tovovavy maromaro dia teo an-tsena nandritra ny vanim-potoana maromaro. Ireo satelita amam-bika amboara, natao tao anatin'ity fomba ity, dia hijery tsara sy maoderina. Miankina amin'ny halaviran-drivotra sy ny isan'ny lavaka, dia tsy azo atao amin'ny mandeha na ny fiantsenana izy ireo, fa amin'ny andro fiasana ihany koa, raha tsy manana fehezan-dalàna hentitra ny orinasa. Ny mpampiasa sasany dia afaka mampifamatotra ny fikarakarana fanao am-pilaminana tsy amin'ny alalan'ny T-shirts sy ny lobaka vita amin'ny hoditra , fa koa amin'ny akanjo marevaka mahitsy.
Wide leggings overalls
Ny any ivelany dia tsy mahavaha ny lazany. Na inona na inona raha mifidy akanjo fotsy maintimainty na volon-koditra ianao, ny volavolam-boky ankehitriny dia hanome endrika sarobidy manokana ary manantitrantitra ny fitiavany ny tovovavy. Ankoatra izany, dia tena tsara amin'ny ririnina (eo ambany dia afaka mametraka ny fitafiana mafana ianao), ary amin'ny fahavaratra (tsy hifikitra mafy amin'ny vatana, hanome ventilation tena tsara izany ary hahatsapa amin'ny toetr'andro ianao).
Ny famakafakana ny tsipìka amin'ny denim amboaram-peo, afaka miteny amim-pahalalahana isika fa ny pantina nipetaka dia manan-danja ary mijery mahaliana sy mitadidy. Miaraka amin'izany, dia mora ny manitsy azy io ary manolotra azy io amin'ny fahazavana kokoa. Ohatra, ireo tovovavy manana hantsana lava dia mety tsara amin'ny fipoahana avy amin'ny hip, izay mampihena tsikelikely ny haavony ary manova ny fifantohana amin'ny faritra misy olana. Ary miaraka amin'ny elatra, manitatra ny lohalika, dia afaka mamorona mora sary tsara tarehy sy malefaka ianao amin'ny fomba 70.
Jeans miaraka amin'ny lava lava
Ny ampy sy ny fahafoizan-tena dia fifandimbiasana lava lava. Tahaka ny hoe mifamatotra akanjo misy pataloha fotsiny izy ireo, saingy tsy manala azy ny maha-izy azy sy ny maha-tokana izany, satria misy karazana sy loko maro. Ireo manga manga sy mainty mainty dia mety hokapohina miaraka amin'ny akanjo, kiraro. Noho izany dia afaka mamorona sary vaovao sy mahaliana isan'andro ianao.
Jeografika fohy kely
Ho an'ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra dia maro ireo karazana modely. Ny satroka fanao am-bifotsy dia mety amin'ny pataloha, shorts ary akanjo. Tonga amin'ny loko isan-karazany izy ireo, avy amin'ny fanabeazana klasika ka manova ny endriny misy tsindrimandry. Ho an'ireo ankizivavy izay tia vahaolana tsy mahazatra, ireo mpikarakara dia manomana ny tifitra, voaravaka amin'ny applique, embroidery, kiraro, kiraro ary kiraro.
Jeansy amin'ny ankapobeny
Ny ankizivavy maingoka dia tsy maintsy manandrana manandrana ny fitafy ankanjo jeans. Hanasongadina tongotra mahafinaritra izy ary hanao ny sary ho toy ny vehivavy sy manintona araka izay azo atao. Ny fahombiazan'ilay tongolobe amin'ny vokatra farany dia hiankina be dia be tsy amin'ny modelin'ny mpanamboatra, fa amin'ny fomba hafa ny zavatra hafa nofantenana ho azy. Ny top dia azo atao amin'ny endriky sarafàna na akanjo. Indraindray, raha tokony ho ny tendron'ady mahazatra amin'ny lavaka mihodinkodina, dia fehikibo lava fotsiny no itiavan'ny zipo - sokajy voalohany sy mahaliana.
Ny vehivavy vehivavy lamaody, fa tsy miandry ny vanim-potoana mafana, dia mitafy lobaka ny akanjon'ny vehivavy eny amin'ny ririnina. Mba tsy hampidi-doza ny fahasalamana sy ny fampiononana, ny zazavavy dia poddevat eo ambanin'ny baolina miloko marevaka . Indraindray amin'ny fampisehoana sary nalaina sy mavitrika dia ampiasao lantihy miaraka amin'ny lamina ornamenta na loko. Ary raha miresaka momba ny vanin-taona mafana isika, dia tsy misy fetrany ny saha ho an'ny fanandramana.
Drakitra tapaka tanteraka
Anisan'ireo karazana trondro marobe, ny tovovavy iray miaraka amin'ny karazana tarehimarika rehetra dia afaka mifidy ny safidy mahomby indrindra ho azy, izay hanantitrantitra fotsiny ny mendrika ny sary ary mametraka marina ireo aksantany. Mba hahafahana manao izany, dia mila mahafantatra izay tokony hatao ny amboaram-behivavy vehivavy ianao, ary inona no fomba tsara indrindra horaisina. Ny vehivavy manana endrika boribory dia tokony hialana ireo modely izay mifanentana loatra amin'ny silhouette. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia mametraka ny tsy fahampiana amin'ny fampisehoana ampahibemaso izy ireo. Ireto misy zavatra vitsivitsy hitadiavana:
Alefaso ny modely amin'ny fomba fitenenana manify ao amin'ny faritra décolleté. Izany dia hanampy amin'ny fampivoarana ny fifantohana amin'ny hips sy ny kibo, manantitrantitra ny hakanton'ilay bust.
Ny endriny tsara indrindra ny pataloha na shorts chinos, aladinki, sipa, mahitsy ary miaraka amin'ny akanjo avy amin'ny hip.
Mba hahafantaranao izay tokony hatao amin'ny fitetezam-peo marevaka, manomboka amin'ny fotoana izay fotoana itiavanao ny akanjo. Ny tsipika isanandro dia mety amin'ny T-shirt miaraka amin'ny printy voalohany, akanjom-bolo na blouz, mba hahafahana mampiaraka sy mivoaka eny amin'ny tampony, mipetraha amin'ny akanjom-boninahitra maingoka, misafidy kiraro na sandam-pandihizana ary fehikibo.
Fitsipika ankizivavy ho an'ny birao amin'ny lohataona
Skirt miaraka amin'ny fofona amin'ny tavy
Ny lokon'ny volombava - akanjo amin'ny akanjo
Ahoana no hianaranao hihomehy tsara?
Skirt-bell - amin'ny inona no tokony harahina?
Photosession on the river
Anna Kurkurina - sakafo ara-dalàna
Ny sakafo amin'ny sakadia - ahoana no fomba hihinanan-tsakafo araka ny tokony ho izy mba hahazoana mavesatra?
Famakafakana ny faniriana
Schizophrenia amin'ny ankizy
Ohatrinona ny proteinina ao amin'ny nono?
Ahoana ny fifandonana amin'ny iodinol?
Fetim-bovoka amin'ny foetus
Boots winter with fur
Manticore - inona ity zavaboary ity ary ahoana no fijery azy?
Platyphylline - famantarana ny fampiasana
Trano any Mediterane
Sakafo amin'ny abrikina maina
Ahoana ny fisafidianana ny sandriny?
Ny fomba fomba handrafetana ny afovoan-trano amin'ny loko miloko
Ny lalàna mifehy ny fifandraisana dia tsotra sy mora azo
Kevin Federline dia nanome fanadihadiana lalina momba ny fifandraisana amin'ny Britney Spears sy ny fampiofanana ny zanany